Fampihavanam-pirenena Toa ny teo ihany no miverina, hoy ny VAMI
Fifidianana Depiote Handrotsaka kandida maro ny HAFARI
Nivoaka tamin’ny fahanginana omaly ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny.
Mpitondra Malagasy Mifampiaro amin’ny ratsy sisa
Sesilany ny toe-javatra manaratsy endrika ny rafi-panjakana sasany sy ny tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena, raha tsy hilaza afa tsy ny teo anivon’ny minisiteran’ny fitsarana, ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola, ny minisiteran’ny raharaham-bahiny,…
Fifidianana ho filoham-pirenena Mbola maro ny dingana hatrehana
Mitarazoka ny fivoahan`ny lalam-pifidianana izay efa ho valo volana no nanoloran`ny CENI azy ity teo anivon`ny filankevitry ny governemanta.
Inde sy Madagasikara Hihamafy hatrany ny fifandraisana
Nifarana tetsy amin`ny Oniversite an`Ankatso ny fitsidiam-panjakana nataon`ny Filoham-pirenena Ram Nath Korvind teto Madagasikara. Nandritra ny lahateny manoloana ny mpianatra dia nanambara ny filoha Ram Nath Korvind fa nampiraisin’ny tantara i Madagasikara sy Inde ary mivelatra hatrany ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta.
Olan’ny fifidianana baolina kitra Malagasy Nandao antsika omaly hariva ny iraky ny FIFA sy CAF
Rehefa avy nihaona tamin’ny ankolafin-kery Malagasy eo amin’ny sehatry ny baolina kitra toy ny birao mpanatanteraky ny FMF, ireo mpikambana ao amin’ny CEN Football, ny filohan’ny fikambanan’ireo ligim-paritra eto amintsika ary koa ireo andian’olona nametraka fitarainana tany amin’izy ireo nivantana ireo
Depiote Nicolas Randrianasolo “Minisitra 2 mila esorina”
Misy endrika fanakorontanana ao anivon’ny Antenimieram-pirenena misy anay ao, hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo avy any Betroka naneho hevitra teny Antaninarenina ny talata 13 martsa.
Tatitra momba ny fifidianana Nandamindamin-dresaka ny praiminisitra
Nihaona tamin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly alarobia 14 martsa ny solontena manokan’ny sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana (ONU) Haile Menkerios.
Zo tsy azo tsinontsinoavina ny fidinana an-dalambe, indrindra, amin’izao firenena tsy mety miarina izao, hoy ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin’ny antoko Vahoaka miray, Gaby Vakiniadiana.
Aiza isika izao, hoy izy, raha oharina amin’ny japoney nefa firenena tsy nifanalavitra ihany teo aloha? Mba manana manam-pahaizana sy feno harena ihany fa mivarina an-kady sy miha mahantra hatrany satria lasan’ny tsy manam-panahy ny tombony rehetra. Maniry aho mba ho olo-marina amin’izay no hitondra eto satria ao anatin’ny 25 tapitrisa ve dia tsy mba hisy na dia iray aza ho izany? Isan’ny manahirana amin’izao fotoana, hoy izy, ity fampihavanana tsy mety tafapetraka ity ary iza ireo komity mpifantina izay handrafitra ilay vaovao raha tsy ny efa teo ihany? Sao dia isan’ireo tokony ho hampihavanina, hoy hatrany ny tenany?